Wedding Photo Ịkekọrịta - Olee ka Ekekọrịta Wedding Photos na ndị ọzọ
> Resource> Atụmatụ> Wedding Photo Ịkekọrịta - Olee ka Ekekọrịta Wedding Photos na ndị ọzọ
Mgbe nnukwu ụbọchị agbamakwụkwọ, ị ga-emeela tọn foto agbamakwụkwọ iji buo ụtọ agbamakwụkwọ na-echeta. Ugbu a, ọ na-abịa idozi foto na-eso ha na ndị ezinụlọ na ndị enyi.
E nwere ọtụtụ ụzọ na-eso foto agbamakwụkwọ, dị ka na-ebugote ha ka ha a agbamakwụkwọ foto nkekọrịta saịtị, dị ka Flickr, Photobucket, Pictoma, wdg Ụfọdụ agbamakwụkwọ foto nkekọrịta saịtị-enyere gị dezie agbamakwụkwọ gị photos mgbe na-ebugote iji nweta a mma mmetụta.
N'ezie, na-ekere òkè foto agbamakwụkwọ online bụ ezigbo ụzọ ịkọrọ gị ụtọ agbamakwụkwọ ebe nchekwa na ihe ndị mmadụ. Nwere i chere banyere ụzọ ndị ọzọ ịkọrọ gị foto agbamakwụkwọ ma ọ bụ gị mgbe chere banyere otú ịkọrọ foto agbamakwụkwọ na a ọzọ mara mma ụzọ karịa nnọọ nanị na-ebugote photos na na Internet? Ebe a anyị nyere ọtụtụ ngwọta maka mma agbamakwụkwọ foto nkekọrịta na ichebe.
Mara mma ụzọ ịkọrọ gị foto agbamakwụkwọ
1. Mee a Foto agbamakwụkwọ ngosi mmịfe
Họrọ ụfọdụ ezi foto agbamakwụkwọ na-eme ka a Foto agbamakwụkwọ ngosi mmịfe na mgbe ahụ ịkekọrịta ngosi mmịfe on YouTube, Facebook, wdg bụ oké ụzọ ịkọrọ gị foto agbamakwụkwọ. Na Wondershare DVD Slideshow Builder Deluxe, ị nwere ike atụgharị gị foto agbamakwụkwọ na-fabulous elu àgwà agbamakwụkwọ na fim ndị wuru na-free Holly-osisi nkiri ekwekọghị. A agbamakwụkwọ ịke mkpọ na-haziri karịsịa maka agbamakwụkwọ ọrụ na-eme ka zuru okè Foto agbamakwụkwọ fim ịkọrọ foto agbamakwụkwọ n'ụzọ dị mma. Ke adianade do, 3D ekwekọghị na ikwu n'ụzọ na-awa! E wezụga, i nwere ike ire agbamakwụkwọ foto nkiri ka DVD diski na ọmarịcha agbamakwụkwọ DVD menus na-ekiri ya na TV na ihe ọ bụla DVD ọkpụkpọ. Ị nwere ike izipu agbamakwụkwọ DVD diski ka ezinụlọ na ndị enyi. Nwere ikwu, ọ bụ a fashionable ụzọ nke agbamakwụkwọ foto nkekọrịta.
2. Mepụta a agbamakwụkwọ flash ngosi mmịfe
Ọ bụrụ na ị nwere a blog na-achọ ịkọrọ gị foto agbamakwụkwọ na gị blog, mgbe ahụ, a agbamakwụkwọ foto nkekọrịta ụzọ ga-adị mma n'ihi na ị. Akpọkọta ndị unu foto agbamakwụkwọ na agbamakwụkwọ songs, ahụ ga-esi ndị kasị mma flash ngosi mmịfe onye - Wondershare Flash Gallery Factory Deluxe, ị pụrụ ime a agbamakwụkwọ flash ngosi mmịfe na ọrụ agbamakwụkwọ ndebiri na clicks! Ọ dịghị flash nkà na-achọrọ. Ị nwere ike ịtọ mgbanwe na ngagharị mmetụta na-ewetara gị ka foto agbamakwụkwọ ndụ!
Mgbe na-eme agbamakwụkwọ flash ngosi mmịfe, i nwere ike ịkọrọ ya na Facebook, Twitter, Myspace, Blog & weebụsaịtị. Agbamakwụkwọ foto nkekọrịta, nke a bụ nnọọ ezi ụzọ.
3. DIY a agbamakwụkwọ scrapbook
Olee banyere-eme a agbamakwụkwọ scrapbook na akụkụ Akwụkwọ Nsọ, decorations, wdg na n'ibi scrapbook si? Ị nwere ike ma zitere agbamakwụkwọ scrapbook ka ezinụlọ na ndị enyi ma ọ bụ ịkọrọ dijitalụ agbamakwụkwọ scrapbook online.
Wedding Video edezi - Olee otú dezie Wedding Videos
Wedding ngosi mmịfe - Olee otú Mee a Wedding ngosi mmịfe
Olee otú iji Gbochie na deactivate Facebook Ozi na Facebook.com
Wedding Scrapbook Ideas - Mee a Wedding Photo Album maka agbamakwụkwọ gị
Retirement Scrapbook echiche maka ezumike nká Scrapbook Ime
Olee otú Mepụta a Survey na Survey Nrụpụta
Olee otú Mee Flash Ngosi ngosi mmịfe Tutorial